Iindaba - Ukufika okutsha okungenabhotile engenamoya – Kutheni ungahambanga nomoya ukupakishwa kwezithambiso?
Iibhotile zempompo ezingenamoya zikhusela iimveliso ezibuthathaka ezifana nezithambiso zokhathalelo lolusu zendalo, iiserum, iziseko, kunye nezinye iikhrim ezisebenza ngaphandle kokubamba ngokubathintela ekuvezeni kakhulu umoya, oko ke kuyonyusa ubomi beshelufu yemveliso ukuya kuthi ga kwi-15% ngaphezulu. Oku kwenza itekhnoloji engenamoya ibe likamva elitsha lobuhle, lonyango kunye nokupakishwa kwezithambiso.
Ibhotile engenamoya ayinayo ityhubhu yokuntywila, kodwa kunoko isisithambisi esinyukayo ukuhambisa imveliso. Xa umsebenzisi exinzelela impompo, idala isiphumo sokutsala, ukuzoba imveliso ukuya phezulu. Abasebenzisi banokusebenzisa phantse yonke imveliso ngaphandle kwenkunkuma eseleyo kwaye abayi kuba naxhala malunga nengxabano ehlala iza nempompo esemgangathweni kunye nokupakishwa kwezithambiso.
Ukongeza ekukhuseleni ifomula yakho kunye nokonyusa ubomi bayo beshelfini, iibhotile ezingenamoya zikwabonelela ngesibonelelo sophawu. Sisisombululo sokupakisha esiphakamileyo esiza neendlela ezahlukeneyo zokuhlangabezana nokubekwa kwakho kubuhle.
Ukupakisha yinto ephambili kwimveliso yezithambiso kunye neziqholo. Ukupakisha kula mashishini akuhambelani kuphela nokukhuseleka kunye nokukhuselwa, kodwa kukwahambelana nokuqinisekisa ukuba iimveliso zihlala zikwimeko entle xa zihanjiswa kunye nokugcinwa. Ukubaluleka okwandayo kokuzilungisa, kunye neemfuno ezikhulayo zeminyaka eliwaka, kunyanzelise iinkampani ezininzi zokwenza iziqholo ukuze zilungiselele iimfuno zentengiso yalapha. Umzekelo, iAll Good Scents, inkampani yeziqholo ezinokuhlala e-Ahmedabad, yasekwa ngonyaka ka-2014. Inkampani yazisa ngeempahla zayo zexabiso kwimarike yalapha yaze yarekhodisha i-40% yokuthengiswa kwentengiso kwi-2016.
E-United States, ukwanda kokuthandwa kwetekhnoloji yokupakisha izithambiso esele ihambile kunye nokukhula kweemveliso zokhathalelo lolusu zezinye zezinto ezibalulekileyo eziqhuba ukukhula kweemarike. Ukunyanyekelwa kweenzipho kunye neemveliso zeziqholo zibonakala njengeyona nto ixhalabisa abathengi kunye nabathengisi elizweni. Ngenxa yemfuno ekhulayo yezithambiso, abathengisi abaninzi bezithambiso bayasamkela kwaye basungula izisombululo zokupakisha zeglasi smart ukuphucula izibonelelo zabathengi kunye nokuphucula ukhuseleko lwemveliso.
Ijayi yeKhrimu yeLiso, Isithambisi sePowder sePowder kunye neSifter, Iziqulatho zeCream cosmetic, Ihowuliseyili cream Cream Jar, Cream Jars Izithambiso Packaging, Ibhotile emnyama yeGel Polish,